Xogtii ugu dambeysay Siyaasadda Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Xogtii ugu dambeysay Siyaasadda Galmudug
December 12, 2017 December 13, 2017 admin169
Siyaasadda Galmudug ayaa waxaa beryahan xiiso gaar ah u yeelay heshiiskii ay arbacadii hore Muqdisho ku kala saxiixdeen Galmudug iyo Ahlu sunna, heshiiskaan inta badan dadku ka dhursugaan dhaqangalkiisa. Siyaasiyiinta iyo waxgaradka ayaa si guud u soo dhaweeyey. kadib Waxaa shalay Cadaado ku soo laabtay Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale, Madaxweyne ku xigeenka, iyo masuuliyiin kale.
Imaansha Madaxweynaha Magaalada Cadaado xarunta kumeelgaarka ah Galmudug ayaa ujeedadeeda lagu sheegay sidii uu heshiiskii uu soo galay uga gadi lahaa Xubnaha Maamulkiisa iyo bulshada deegaanka. Madaxweynaha ayaa kulankii ugu horeeyey saaka la yeeshay golaha wasiirada Galmudug, iyagoo si wadajir ah u soo dhaweeyey.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa kulan la qaatay odayaasha Beesha Cadaado inkastoo aysan si qoto dheer uga wada hadlin arimaha siyaasadda, haddana waxay isla meel dhigeen in si deg deg ah wax looga qabto isbaarooyin ay dhigteen qaar ka mid ah ciidamada iyo maleeshiyo beeleed. iyadoo la fulinayo amarka Madaxweynaha Ciidamada Daraawiishta Galmudug ayaa saacado kadib cagta mariyey isbaarooyinkii bilqanaa inta u dhaxeysay Cadaado iyo Galinsoor.
Dhanka kale Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu safar ku tago Magaalada Galkacyo, halkaas oo uu bulshada ka gadi doono heshiiska uu la galay Ahlu sunno, Waxaana la filayaa inta uusan Cadaado ka tagin la kulmo wafdi ka socda Qarmada Midoobay oo beri imaanaya Cadaado. Madaxweynaha ayaa marka uu kasoo laabto Galkacyo Aadi doona Dhuusamareeb si halkaas uu loogu dhameeyo heshiiskii Ahlu Sunno.
Dhanka kale Bulshada ayaa u dhag taagaysa isbadalada ay la imaan karaan heshiiskan cusub, waxaana beelaha qaar ay tabasho ka qabaan heshiiska Ahlu sunno oo ay u arkaan sad bursi, Sidoo kale heshiiskan ayaa wiiqaya awoodda Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Galmudug. Madaama awoodahooda qaar uu la wareegi doono Wasiirka koowaad ee lagu heshiisay in la siiyo Ahlu sunno.
Paul Pogba Oo Xaqiijiyay Inuu Diiday Real Madrid